JUJUBE, TAARIIKHDA UNABI AMA CHINESE AH: BEERASHADA DHIRTA QALAAD EE AAGGA - BEERTA
Meelaha dadka deggan ee xagaaga ah, waxaa sii kordhaya suurtagal ah in la arko dhirta qalaad ee aan caadi ahayn oo kaliya ma aha inay sameyso hawl karinta, laakiin sidoo kale waxay keeni kartaa goosashada faa'iido leh. Sidaa darteed, in this article waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah dhirta kuwan, loo yaqaan isla markiiba dhowr "magacyo": zizifus, unabi iyo taariikhda Shiinaha.
Jujube: Sharaxaad Qaadashada
Sida dhirta kale, unabi waxay leedahay qaddar u gaar ah beerashada iyo daryeelka, si kastaba ha ahaatee, ka hor intaan la sii wadin tixgelintooda, waa inaad si fiican u baratid taariikhda Shiinaha.
Jujube waa dalagyo miraha miraha ah oo si joogto ah ugu koray Shiinaha muddo ka badan 6000 sano. Aaggaas, in ka badan 400 nooc ayaa koraan aag ah 200,000 hektar, taas oo ah wax ka badan dhulku degay dhammaan dalagyada miraha ee Ukraine.
Ma taqaanaa? Midhaha ugu khafiifsan ee unabi ayaa u qalmaa kuwa ka soo baxa aagagga buuraha, halkaas oo ciidda aan hodan ku lahayn humus.
Hindiya, Pakistan, Afgaanistaan, Algeria, Israel, Masar iyo dalalka Caucasus waxay ku faani karaan dhulal ballaadhan oo leh taariikhahaas. Intaa waxaa dheer, dhawaan waxay muujiyeen xiisaha iyaga oo ku jira Maraykanka, Talyaaniga, Spain, Faransiiska, Ruushka iyo Ukraine.
Jujube waxaa ku yaal geedka yar (ama baadiyaha dheer) oo leh dherer aan ka badneyn 5 mitir. Taajku waa mid ballaaran, faafaya oo leh qaab aad u soo jiidasho leh. Bare, caleemaha guduudan-caleemaha ayaa leh qaab jilibka ah, oo leh khafiifin khafiif ah oo ku yaala wareegyada ilaa 3 cm dhererka.
Midhaha caanuhu waa mid qallalan, qoryaan ama pear-qaabeeya, 1.5 cm dheer iyo miisaan dhan ilaa 50 g. Midabkoodu wuxuu noqon karaa mid aad u kala duwan: laga bilaabo brown light ilaa cawl madow. Dhaleecaha duufaanka (sida, drupe waa miro of zizifus) waa cufan oo wuxuu leeyahay dhadhan macaan ama dhadhan macaan. Guud ahaan, labadaba dhadhanka iyo midabka, labaduba waxay u eg yihiin qalajinta caadiga ah ee tufaaxa, inkasta oo lagu qiimeeyo maaddooyinka waxtarka leh ee ka samaysan ka kooban (gaar ahaan potassium iyo magnesium waa in la kala saaraa).
Waxa loo isticmaali karaa labadaba cusbo oo laga sameeyey sirta: geeddi-socodka baradhada la shiiday, marmalades, waxsoosaarka ama miraha candied ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa warshadaha macmacaanka. In foomka qalajiyey ee midhaha waxay noqon kartaa in ka badan hal sano ah, iyada oo aan lumin dhammaan dhammaan hantidooda faa'iido leh.
Si kastaba ha noqotee, si aad u sarayso nidaamkan, waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u ogaatid sida si haboon u kaydiso midhaha ziziphus. Tusaale ahaan, qaabka ugu caansan ee kaydinta warshad la bixiyay waa la qalajiyey ama la qalajiyay miro la gooyay weel daboolan oo si adag u xiran, qolka qolka leh heerkulka qolka caadiga ah (illaa +25 ° C). Cusub, waxay si aan qarsoodi lahayn uga tegi karaa qaboojiyaha bil dhan.
Waa muhiim! Maadaama miro-khudradda aan haysanin wax kayd ah, way fududahay in qorraxda qalloobo iyada oo aan loo baahneyn wax dheeraad ah. Foomkan, waxay ku jiraan 5% of acids organic, 15-25% sonkorta, 1.5-3% borotiinka, ilaa 2% istaarijka, 3-4.5% dufanka iyo ilaa 1.1% pectins.
Miro qallalan oo cusub oo la qalajiyey ayaa si guul ah loogu isticmaalaa daaweynta hargabka, dhibaatooyinka kelyaha, beerka, caloosha iyo wadnaha.
Waqtiga ugu habboon iyo xulashada goobta degelka
Ka dib markii la ogaaday waxa ziziphus yahay, oo si adag u go'aansanaya in uu koro warshaddan agagaarkaaga, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa ugu fiican ee lagu fulin karo xilliga gu'ga, sababtoo ah inta lagu jiro beerashada xilliga dayrta waxaa jiri kara suurtagal ah in lagu keydiyo unabi ahaan bilawga hore ee dhaxantii hore.
Waa muhiim! Muujinta astaamaha ee taariikhda Shiinaha waa kobaca tartiib tartiibka sanadka ugu horeeya ka dib marka la beerto, sidaas darteed, sameynta taajkii waxay bilaabi kartaa bilo ka hor hal sano.
Zizifus wuxuu jecel yahay iftiin aad u liita isla markaana wuxuu aad u liitaa meelaha hoose, mar walbana waxay ubaxaan ubaxyo madhan. Taasi waa sababta geedo unabi ah waxaa habboon in la doorto meel ka soo qarsoon tiirarka, laakiin si fiican loo heli karo raajooyinka qorraxda.
Beeraha gu'ga ee taariikhaha Shiinaha, qaybaha sare iyo hoose ee koonfurta iyo koonfur galbeed, iyo sidoo kale goobaha la isku dhaw yahay iyo kuwa la ilaaliyo ayaa ku habboon. Masaafada u dhexeysa dhirta ku dhow waa in aysan ka yarayn 2-3 m.
In kasta oo xaqiiqda ah in unabi uu yahay warshad qalafsan oo nagu soo fool leh, sii kordhaya ma noqon doonto mid adag oo daryeelana waa mid sahlan. Unabi waa wax aan la qabin oo ka kooban halbeegga ciidda, laakiin wuxuu ka jawaabayaa bacriminta dheeriga ah ee la goosanayo. Sidaa darteed, ka hor inta laga beeri dhirta, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo xayawaanka leh cabbirka mitir in horey iyo horudhac Bacriminta macdanta oo leh wadaag digada lo'da (waxaa sidoo kale lagu qasi karaa ciidda).
Waa muhiim! Ka hor inta aan la beeriin geedaha zizifus, waa lagama maarmaan in maskaxda lagu hayo in taajirada caanuhu noqoto mid sii kobcaya inta lagu jiro koritaanka, taas oo macnaheedu yahay in ay ka fiican tahay in la raaco qorshaha beeraha 3x4.
Roobin geedo shimbireed on site ah
Markaad dooranaysid Shiinees-ka, waxaad doorbidaa noocyada hore ee barafkoodu u adkaysto ee la beeray laga bilaabo Maarso illaa May ama laga bilaabo Oktoobar ilaa Nofeembar. Dhirta yaryar waxaa lagu aasaa ceelka oo aan ka badnayn 10 cm, ka dibna beerihii ay beeri ku beeri jireen.
Sidoo kale waa muhiim inaad maskaxda ku hayso in ugu wanaagsan ee taariikhda Shiinaha, zizyphus agrotechnology ay ku lug leedahay carqaladaynta carrada yar yar ee dhirta yaryar, kuwaas oo badalaya qashin. Marka la sameeyo mulching, arrinka organic waxaa si joogto ah loo soo bandhigay dhulka.
Ka dib markii la geliyo seedling ee godadka bacriminta, si adag u buuxi carrada iyo tampag. Ka dib, in dhammaan geedaha yar yar waa in si taxadar leh loo waraabiyo.
Xitaa waxaad isticmaali kartaa seedling kaas oo si madax banaan koray dhagax, kaliya kiiskan waxaad u baahan tahay inaad fahamto in doorashadani ay tahay mid adag oo dhib badan.
Zizifus waa warshad iskutallaabin ah oo aan awood u lahayn inuu midho u dhasho. Sidaa daraadeed, si aad u hesho dalag, waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero dhowr nooc oo unabi ah markasta oo aad ka mid tahay qorshahaaga. Waxay u dhowdahay in ay midba midka kale (dabcan, adoo tixgelinaya dhammaan shuruudaha), waxay u sahlanaataa inay gudbiso pollen.
Beerto khaas ah waa badhkii guusha, lakiin weli waa inaad siisaa daryeel haboon oo ku saabsan sirta. Dhab ahaantii, tani ma aha wax dhibaato ah, laakiin waxa ugu muhiimsan waa in la xaqiijiyo dhirta waqti waraabinta, bacriminta iyo saarista weedhaha.
Waraabinta waa in la sameeyaa marar dhif ah oo tiro yar, gaar ahaan marka uusan roob lahayn wakhti dheer. Qalabaynta ciidda waa wax xun oo aan loo baahnayn, waxayna u horseedi kartaa in goosashadu ay yartahay.
Sababtoo ah qaab dhismeedka nidaamka xididkeeda, ziziphus ma aha oo keliya heerka sare ee caabbinta barafka, laakiin sidoo kale si fudud ula qabsan kara abaarta. Isla mar ahaantaana, waa in aynaan illoobin in qoyaanka xad-dhaafka ah uu waxyeelo u yahay dhirta, sidaas darteed waraabinta waa in la bixiyaa. Intaa waxaa dheer, bishii June, marka midhaha bilaabaan inay koraan, dhirta u baahan yihiin qalalan, sidaas waraabinta waa in si buuxda loo tirtiro. Iyada oo bilawga xilli hore ee sii kordhaya, waxaad bilaabi kartaa inaad quudiso sirta. Waxaa la sameeyaa laba jeer xilli xili xilli badanaaba isticmaal "Crystal", oo biyo ku qulqulaya 15-20 g halkii 10 litir oo biyo ah. Iyada oo bilawga miro la buuxa, tirada dhaymada ayaa kordhay iyada oo lagu darey Bacriminta macdanta diyaarsan.
Nafaqada Zizyphus waa mid aad u adag, badanaaba miraha waxaa loo isticmaalaa in lagu beero warshad dhuleed, kuwaas oo soo baxa oo uumi aad u liita. Intaa waxaa dheer, waxaad samayn kartaa dhalmo ee qalaad iyo la caawiyo ee gaysashada, laakiin waa caqabad. Sidaa darteed, bannaanka u badan ayaa ku soo biiray iibsashada geedo diyaar ah oo ka soo jeeda khubaro la xaqiijiyay.
Daryeelka loogu talagalay unabi wuxuu bixiyaa nadiifinta waqtigeeda oo ka timaadda cayayaanka soo baxaya, kuwaas oo ah derisyo aan loo baahnayn oo ka mid ah dhirta.
Ka hor inta aysan imaanin xilliyada qaboobaha geedo yar yar qabow, iyo dushooda ku duudduubay wax aan la taaban karin. Dhirta qaangaarka ah waxaa lagu dabakhi karaa kaliya gobollada halkaasoo heerkulka jiilaalka hoos u dhaco -35 ° C.
Qalabaynta iyo sameynta tufaax aan caadi ahayn
Sida dhirta kale oo badan, taariikhda Shiinaha waxay u baahan tahay inay sameyso taaj, laakiin waxay ka wanaagsan tahay in la sameeyo habraacan 1-2 sano ka dib marka la riixo, taas oo gacan ka geysaneysa in laga fogaado dhaawacyada aan caadiga ahayn.
Inta badan, taajka waxaa la siiyaa qaab koob ah iyada oo la adeegsanayo 4-5 laamood oo waaweyn, kuwaas oo la dhigo agagaarka jiriga. Xaaladdan oo kale, caleemaha ugu muhiimsan waa in la googooyaa illaa 15-20 cm, iyo laamoodyo kale oo la gooyey heer isku mid ah. Inta lagu jiro koritaanka iyo samaynta zizyphus, manjooyin nadaafadeed oo ka mid ah laamaha gudaha koraya waxaa loo sameeyaa si wakhti ah. Warshad qurux badan oo la qurxiyo iyo xarrago leh ayaa qurxin doona beerta oo dhan waxayna awoodi doonaan inay kuugu farxaan ubaxooda muddo dheer.
Fruiting: qashinka goosashada
Muddada fruiting ee geedo of unabi bilaabmaa oo keliya 4-5 sano ka dib beergooyska abuur, iyo xilliga wax soo saar leh ee dhirta bilaabmaa oo kaliya 10-15 sano. Si kastaba ha noqotee, daryeel fiican, xitaa kororka "lowska" ka soo lafaha ayaa bilaabi doona in uu abuuro ugxan sidaha bilowga sanadka 2-3aad, halka geedo isbeddel ah, oo ku xiran rooting tayo sare leh, ayaa sidoo kale keeni kara berry sanadka ugu horeeya ka dib markii laga beerto dhul furan.
Zizifus waa la kala dirayaa, taas oo u ogolaaneysa inay ka fogaato dhaxan guga sii deynta. Waxaa jira ubaxyo badan, oo iyaga ka yimaada ari aad u qurux badan, carafo macaan oo soo jiidata tiro badan oo cayayaanka. Muddada ubaxu waa 60 maalmood. Inkastoo xaqiiqda ah in qaar ka mid ah ubaxyada aan weli la karin, marka fruiting, unabi soo saari karaan ilaa 60 kg ee berry (ka mid ah warshad qof weyn).
Ubaxa aan isku mid ahayn ee zizifus wuxuu saameeyaa Bisaylkiisa midhaha, taas oo ah mid aan si siman lahayn. In ganaax, diirinta miro kuleylka ah ayaa badanaa dib loo dhigaa illaa dhammaadka Oktoobar (bilawga bisha Sebtembar).
Ma taqaanaa? Miisaanka midhaha zizifus wuxuu ku kala duwanaan karaa 3 ilaa 20 g.
Haddii loogu talagalay isticmaalka cusub waa lagama maarmaan in la sugo Bisaylka buuxa ee midhaha zizifus, ka dibna loo shaqeeyo waa laga saaraa laanta marka maqaarka cagaarka leh ee cagaarka ah uu ka muuqanayo saddex meelood meel sare. Guud ahaan, midhaha unabi ah lagama saari karo in ku filan, oo ka tegaya geed.
Qalabka cayayaanka ah waxaa loo isticmaalaa "shanlo" gaar ah, oo leh ilko ilaa 1 cm. Iyadoo la isticmaalayo "comb", miraha zizifus waxaa lagu daadiyaa filim, ka dib markii ay kala soocaan caleemaha iyo caleemaha. Ilaa 30 kg oo miraha laga soo qaado hal geed. Dalagga qalalan ayaa lagu kaydin karaa in ka badan laba sano.
Dabcan, for beerto goobta waxaad u baahan tahay in ay leeyihiin dhirta varietal, iyo waxay ka fiican tahay inaad soo iibsato Zizyphus, oo ka mid ah sifooyinka muhiimka ah kaas oo liiska iyo koriinkedu hore. Kaliya unabi ahaan ma aha oo kaliya in ay si fiican u koraan cimiladeena, laakiin sidoo kale waxay awoodaan inay si firfircoon uga dhigaan miro ka hor xilliga dayrta qaboobaha. Waa noocyo noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kala duwanaanta ballaadhan oo kala duwan ee xulashada Moldavia oo la yiraahdo Mori Jer. Feejignaan yar ma aha in la siiyo noocyo kala duwan oo leh celcelis ahaan xilliga caanaha ee la yiraahdo Vakhsh (miisaanka midhihiisa uu gaaro 14-16 g). Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aan loo eegin nooca dhirta aad dooratid, waa inaad had iyo